Gabareey-maanyo - Wikipedia
Legendary aquatic creature with an upper body in human female formTemplate:SHORTDESC:Legendary aquatic creature with an upper body in human female form
Kani waa maqaal ku saabsan naag kalluun leh. ragga, eeg merman. Qaad dadka, eeg merfolk. isticmaalka kale, eeg Gabareey-maanyo (faah faahin).
Sheekada taariikhiga ah, Gabareey-maanyo ama Gabarmaayo waa noole biyood oo leh madaxa iyo jirka sare ee qofka dumarka ah iyo dabada kalluunka. Gabareey-maanyo waxay ka soo muuqdaan hiddaha dhaqamo badan oo adduunka oo dhan ah, oo ay ku jiraan Yurub, Aasiya, iyo Afrika.
Labka u dhigma gabareey-maanyo waa Merman, sidoo kale waa qof caan ku ah sheeko-xariireedka iyo tariikhda. Inkasta oo caadooyinka ku saabsan iyo aragtida merman ay ka yar yihiin kuwa gabareey-maanyo, guud ahaan waxaa loo maleynayaa inay la nool yihiin haweenkooda. Labka iyo dheddigga si wadajir ah ayaa mararka qaarkood loogu yeeraa merfolk ama merpeople.
Gabareey-maanyo waxay ahaayeen mawduuc caan ah oo fanka iyo suugaanta qarniyadii dhawaa, sida sheeko suugaaneedka Hans Christian Andersen ee "The Little Mermaid" (1836). Ka dib waxaa lagu sawiray operas, sawiro, buugaag, majaajillo, animation, iyo filimaan ficil toos ah.
↑ Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named oxforddictionaries1
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gabareey-maanyo&oldid=224857"
Bahalada sheeko xariirka
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 25 Nofeembar 2021, marka ee eheed 17:02.